Zidane oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Lionel Mesi inuu ka tagayo kooxda Barcelona – Gool FM
(Madrid) 03 Luuliyo 2020. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay wararka la isla dhexmarayay saacadihii la soo dhaafay ee ku aadanaa in Lionel Messi uu ka tagayo Barcelona.
Idaacada “Cadena SER” ee dalka Spain ayaa sheegtay hadal layaab leh isla markaana niyadjab weyn ku ah taageerayaasha kooxda Barcelona, kaddib markii ay shaacisay in Lionel Messi uu go’aansaday inuu ka tago Barca xagaaga 2021, kaddib markii uu ku daalay maamulka iyo in aanu jirin mashruuc cad.
Zidane ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kaddib guushii ay xalay ka gaareen kooxda Gatafe, wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirinaya Messi inuu ka tagayo Barcelona, wuxuuna yiri:
“Barcelona la’aanta Lionel Messi? Ma aqaan waxa dhici doona, wuxuu joogaa halkan horyaalka, waana jecelnahay inay ku sugnaadaan halkan kuwa ugu fiican”.
“Ma aqaano waxa dhici kara, balse waxa ay tahay inaan ku faraxno maanta ayaa ah inaan ku hor qabanay shaqo wadajir ah ee aan caadi aheyn koox adag, waxaan ku guuleysanay niyad samida kooxda”.
Si kastaba ha noqotee, Real Madrid ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka, kaddib markii ay guul dirqi ah kaga gaartay 1-0 kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxayna hada ka sareeyaan kooxda ku soo xigta ee Barcelona 4 dhibcood nadiif ah.